Bụ okpu na etu o si dị mkpa | Network Meteorology
Otu akwa bu ala oru ala mejuputara pere mpe ma obu ala mmiri gbara gburugburu site n’osimiri a banye n’ime oke osimiri. Dabere na oke ala nke na-abanye n'oké osimiri, ọ nwere ike inwe mmetụta na oke osimiri. Site na ụgwọ ndị a, etinyere oke osimiri nwere oke ma ọ bụ obere ebili mmiri. Ejirila ụdọ n'akụkọ ihe mere eme niile na igodo iji debe ụsọ oké osimiri ma ọ bụ ebe etinyere ọkụ ọkụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gịnị bụ akwa na mkpa ọ nwere na ike nke ụsọ mmiri.
1 Gịnị bụ akwa
2 Kacha mkpa capes n'ụwa
3 Cape n'ime ụgbọ mmiri
Cape bụ echiche ma ọ bụ nke a na-eji ma na ọdịdị ala na geology na-egosi ọdịdị ala nke mejupụtara obere ala nke si na ụsọ oké osimiri ruo n’ime ime oke osimiri. N'ebe a, mmiri mmiri dị ala ma na-eme ka igodo na-esiri ike. Ọzọkwa, ebili mmiri a na-emetụta usoro mmiri nke mbara ala.
Otu n’ime njirimara ejiri mara anyị n’ime okpu bụ ịmetụta oke mmiri n’ihi na ọ bụ agbatị na-esite n’oké osimiri. Kemgbe ọtụtụ narị afọ, a na-eji okpu dị ka ebe ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-ezo aka ebe ọ bụ na ha na-ahụ ụzọ ka ukwuu nke ala mmiri ma na-echebe ụgbọ mmiri pụọ n'ihe egwu dị iche iche nke oke osimiri nwere. Ọnụnọ nke okpu ahụ nyere ohere ka ukwuu iji lanarị ma ọ bụrụ na ihe omume atụghị anya ya wee, ya mere, ọtụtụ n'ime okpu kachasị mkpa n'ụwa bụ ebe dị mkpa maka ntinye nke ọkụ ọkụ nke na-eduzi ndị ọkwọ ụgbọ mmiri.
Nwere taa, site na iji igodo satellite na-ebugharị ọkụ ihu enwekwaghị mkpa ha. Ugbu a ị nwere ike ịmata ọnọdụ ahụ n'oge n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla n'ụwa. Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị morphology nke teren mara, kamakwa nke dị n'ime oke osimiri. A na-eme nke a iji zere ihe ọghọm dị iche iche nke ụgbọ mmiri nwere ike ijikọ ọnụ na usoro ugwu ugwu.
Akụkụ ụsọ mmiri a dị ntakịrị nwere ihe atụ dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme. Oge ochie njedebe nke ókèala bụ ihe mkpuchi. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịkọwa ya site na aha Cape Finisterre. Na Latin aha a pụtara njedebe ụwa ma ọ dị n'ụsọ mmiri nke Galicia. Maka ndị Rom oge ochie a ma ọ bụ na njedebe njedebe nke mpaghara ọdịda anyanwụ dum. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ otu n'ime ụlọ ọkụ ọkụ kachasị akara ngosi nke narị afọ nke iri na itoolu ma ọ bụ ebe a maara maka ụgbọ mmiri dị iche iche na ụfọdụ agha ndị mere.
Kacha mkpa capes n'ụwa
Ugbu a, anyị ga-enyocha okpu kachasị mkpa n'ụwa maka mkpa ha dị na mkpa njem ha.
Cape de Creus nke dị na Girona: nke a bụ otu n'ime ebe aga eleta na agwaetiti niile nke Catalan. Ifufe dị n’ebe ugwu na ebili mmiri na-emetụta ya oge niile. Ochichi ikuku a emeela ka a na-etinye okwute site na profaịlụ di egwu na nkpuchi ahu nile. A na-ahụta ya n’ebe ọwụwa anyanwụ nke Ọnọdụ Mmiri nke Iberian. Ọ nwere elu nke 67.2 mita ma rịgoro n'elu Oké Osimiri Mediterenian na ugwu ọwụwa anyanwụ Spain.
Cape Finisterre: Dịka anyị kwurula na mbụ, ọ dị na Galicia n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic ma n'ihi mkpa ọ dị na akụkọ ihe mere eme maka ịbụ ebe dị mkpa ebe enwere ọtụtụ ụgbọ mmiri na ọgụ, ekwuputara na European Cultural Heritage na 2007.
Cape Catoche: okpu a bụ nke Holbox Island dị na steeti Mexico nke Quintana Roo. Ọ bụ ebe ugwu nke mpaghara Yucatan nke dị n'ụsọ Oké Osimiri Gulf nke Mexico. Na akwa a ị nwere ike ikpebi nkewa n'etiti oke osimiri a na Osimiri Antillean. Ọ dị kilomita 53 n’ebe ugwu nke Cancun.
Cape nke atọ Forcas: akwa a dị na Strait nke Gibraltar n'ebe ugwu nke Rif na n'ebe ndịda nke Peninsula Iberia na Osimiri Alboran. O nweela usoro dị mkpa na akụkọ ntolite.
Cape Horn: Ọ bụ akwa dị n'akụkụ ndịda nke agwaetiti Tierra del Fuego, na ndịda Chile. A na-ahụta ya dịka akụkụ ndịda nke mpaghara America.
Cabo nke las Huertas: dịkwa na Spain na ụsọ oké osimiri Levantine dị na obodo Alicante.
Cabo de la Vela: Oke akwa a dikwa oke elu ma di na ndida Southern Caribbean Sea. Kpọmkwem, anyị nwere ike ịhụ ya na Guajira peninshula na Colombia. Akụkụ kachasị elu nwere mita 47 dị elu karịa oke osimiri.
Cabo de San Roque: Ọ bụ otu n'ime ndị ama ama ama ama ama na Brazil niile ma dị ihe dị ka kilomita 51 site na isi obodo. Ọ bụ ama ama ka ọ bụrụ ebe dị n'ụsọ osimiri Brazil nke kacha nso n'ụsọ osimiri Africa.
Cape azu: Enyere aha ya n'ihi na ọ dị ka shark wee gosi mmalite nke ókè n'etiti Panama na Colombia.
Cape n'ime ụgbọ mmiri
A na-ejikwa okwu ahụ eriri eme ihe maka eriri nke ụgbọ mmiri. Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa iburu n'uche mmiri mmiri nke nwere ike iwepụta mkpuchi ala dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri, kamakwa ịnwe nchekwa na ụgbọ mmiri.
Akụkụ nke otu akwa bụ:
Akụkụ dị iche iche nke okpu ihe siri ike, obi na ụtarị. Ihe otiti bụ aha ejiri gosipụta nsọtụ okpu. A maara ọzụzụ niile nke ike dị ka ụlọ ọrụ. N'ime usoro mkpuchi ahụ, ihe ọ bụla arc ma ọ bụ curvature na-etolite n'akụkụ elu dum ka a maara dị ka sine.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe mkpuchi dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Gịnị bụ akwa